Ganacsiga – Page 2 – Goobjoog News
Hay’adda Oxfam ee laga leeyahay dalka UK ayaa sheegtay in uu aad u sii ballaartay farqiga u dhaxeeya dadka hodonka ah iyo kuwa Saboolka ah. Hay’addan ayaa sheegtay in 82% hantida la helay sanadkii tagay...
Dowladda Philippines ayaa ku dhawaaqday inay joojisay shaqaalihii ay u soo diri jirtay dalka Kuwait iyada oo ka cabsaneyso dhibaatooyin ay shaqaalaha kala kulmaan Kuwait. Arrinkani ayaa yimid xilli Philippin ay baaritaan ku sameysay arrin...
Soomaaliya waxaa sanad walba la meel-mariyaa miisaaniyado kala duwan, dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada sida Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, mid weliba waxaa ay leedahay miisaaniyad gaar ah, sidoo kale Somaliland oo...
Wasaaradda maaliyadda ayaa maanta daah furtay habka dhaqan-gelinta Miisaaniyadda 2018ka iyo sidii ay sare ugu qaadi lahaa dhaqan-gelinta howlaha Dowladda horyaala, iyadoo habka loo soo bandhigaay dhaqan-gelinta Miisaaniyada ay tahay mid ka duwan sanadihi hore....
Tiro ka mid ah dowladaha Yurub waxaa ku faafay Ukun la sheegay inay wasaqeysantahay, Turkiga ayaa bilaabay markii ugu horreysay muddo laga joogo 6 sano inuu Ukunta u dhoofiyo dowladaha Yurub. Xuseen Sanguur, oo ah...
Soomaaliya iyo Turkiga ayaa jimcihii Ankara ku kala saxiixday heshiis iskaashi, heshiiskan waxaa uu taabanayaa dhinacyadda Ganacsiga iyo Maalgashiga, Tamarta iyo Macdanta, Waxbarashada iyo kaabayaasha kale ee nolosha bulshada, waxaa goobjoog ka ahaa ra’isul wasaare...
Dowladda Canada ayaa cabasho ka dhan Mareykanka u gudbisay ururka ganacsiga aduunka, waxay Canada u eedeyneysaa Mareykanka inuu ku tumanayo xeerarka u yaallo ganacsiga caalamiga ah. Tallaabadan ayaa timid iyada oo labada dowladood uu ka...
Waa mid ka mida maqaaxiyahay sida weyn looga cuno cuntooyinka wadaniga ah waana dalagyada ka soo go’a wadanka ee magaalada Haegeysa. Waxaana inta badan maalintii halkaan yimaada dad tiro badan oo ka soo doonta cuntooyinka...
Boqorka Sacuudiga Salmaan Binu Cabdi Caziiz ayaa soo saaray tiro amarro ah kuwaasi oo shaqaalaha dowladda iyo ciidamada lagu siinayo badalaad lacageed ka dib markii ay sare u kacday maciishadda. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka...
Shiinaha Oo Canshuurta Ka Yareynayo Maqaarka Dameeraha
Dowladda Shiinaha ayaa go’aansatay inay canshuurta ka yareyso maqaarka dameeraha kaasi oo laga soo dajiyo dekadaha dalkaasi. Waxaa lagu wadaa in canshuur dhimistaan ay bilaabato bilowga sanadkaan cusub waxaana laga dhigay lacagta canshuurta maqaarka dameeraha...